२४ वर्षमा १४ पटक एमाले सरकारमा गयो, तर किन खोजी भएन मदन–आश्रितका हत्याराको ?
बुधबार, ३ जेष्ठ, २०७४
काठमाडाैं, जेठ ३ । यो देशमा धेरैधेरै हत्याकाण्ड रहस्यमय नै छ । दरबार हत्याकाण्डदेखि मदनआश्रीत हत्या प्रकरण र जमिम शाहसम्म । र, आजको सन्दर्भ जेठ ३ को । अर्थात् मदनआश्रीत प्रकरणको ।
२०५० साल जेठ ३ गते पोखराको एक सभालाई सम्बोधन गरेर चितवनको नारायनगढ जाँदै गर्दा दासढुङ्गामा सडक दुर्घटनामा परेर देशको दुई होनाहार राजनीतिक हस्ती मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीतको मृत्यु भयो । मृत्युसँगै एउटा शंका उब्जियो कि, मदनआश्रीतको मृत्यु सडक दुर्घटनाकै कारण थियो वा उक्त दुर्घटना नियोजित थियो ? त्यो एउटा हत्या थियो ?
यो घटना शंकासँगै विवादमा तानियो । कतिले यसलाई हत्या भने, कतिले मृत्यु । तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिब एवम् मौलिक राजनीतिक सिद्दान्त जनाताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर नेपाल मन जित्न सफल भएका नेताहरुको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएसँगै घटनाबारे छानविन गर्न जनस्तबाट तिव्र आवाज उठ्यो, आन्दोलन भयो । अनि मात्रै उक्त घटनाबारे न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको एक सदस्यीय आयोग गठन भयो । अनिल आयोगले सडक दुर्घटनाकै कारण मदनआश्रीतको मृत्यु भएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई एमालेले अस्वीकार गरेपछि पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा अर्को आयोग गठन भयो, जसले मदनआश्रीत चढेको जीप सामान्य दुर्घटना नभइ नियोजित घटना भएको निष्कर्ष निकाल्यो । एमालेले पनि आफ्नै पहलमा घटनाको छानविन गर्न अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पनि छानविन समिति गठन गर्यो । त्यसले पनि घटना नियोजित नै भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
पछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट एकएक गरी तीन सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग गठन भयो । त्यो आयोगले मदआश्रीतको मृत्यु नियोजित नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसरी धेरै पटक धेरै वटा आयोग बनाएर दासढुङ्गा हत्या प्रकरणको् सत्य सार्वजनिक गर्ने प्रयास भयो । तर कसरी, किन र कसले हत्या गर्यो भन्ने तथ्य अझै गुमराहमै छ ।
जीप चालक अमर लामा जिवितै रहनु, डक्टरहरुद्वारा शब पुनपरीक्षणको निष्कर्ष निकाल्नु, अमर लामाले विरोधाभाष तर्क गर्नुलगायत थुप्रैथुप्रै तथ्यहरुले मदनआश्रीतको मृत्युलाई रहस्यमय बनायो । तर २०६० सालमा दुर्घटनामा जिवित भएका जिपचालक अमर लामाको पनि शंकास्पद मृत्यु भयो र पछि घटना झन् रहस्यमयी बन्यो । झन्पछि झन् क्लिष्ट बन्दै गयो । तथ्यसत्य बाहिर आउनै सकेन । यसै विषयमा थुप्रैले लेख लेखे, कतिले चलचित्र बनाए, कतिले पुस्तक लेखे । तर सत्य बाहिर आएन ।
नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिवसँगै जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो मौलिक सिद्दान्त प्रतिपादन गरेका नेताको हत्याबारे खोजबिन गर्नु पार्टीका हिसाबमा एमालेको पहिलो कर्तब्य हो भनिदै आएपनि न त एमालेले यसतर्पm गम्भीर सक्रियता देखायो, न त अन्य दलका सरकारहरुले नै ।
मदनआश्रीत हत्याको २४ वर्षअवधिमा १४ पटक एमाले सरकारमा पुग्यो, एमालेका तर्फबाटै चार जना प्रधानमन्त्री भए, अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै एमालेकै छन् । अझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मदन मण्डारीकै श्रीमती हुन् । कतिपयले भण्डारी मदनकै श्रीमती हुनाका कारण राजनीतिमा स्थापित भएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर, अहिले पनि एमालेले खास सक्रियतासाथ उक्त प्रकरणको यथार्थ सार्वजनिक गर्न पहल गरेको छैन ।
बुधबार काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा २४ औं मदनआश्रीत स्मृतीसभाको आयोजना गरियो । जहाँ नेताहरुले मदनआश्रीतको राजनीतिक योगदानको चर्चा गरे । घटना छानविन हुनुपर्ने भाषण गरे । पुरानो एमाले पार्टी कार्यालय वल्खुमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी मदनआश्रीतलाई सम्झिए र घटनाको छानविन गर्ने फेरि वताए ।
यसका साथै देशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमहरु भए र मदनआश्रीतको सम्झना तथा प्रकरणको यथार्थबारे छानबिन गरिने बताइयो ।
यसरी भाषणमा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पहल गर्छौ भनेर वर्षौंदेखि भनिंदै आइए पनि यथार्थ गुमराहमा छ ः जो यो देशको बिडम्बनाको एक उदाहरण हो ।